नक्कली इन्स्पेक्टर बनेर ठगीधन्दा, सहयोगीसहित घटनास्थलबाटै समातिए:: Naya Nepal
असोज १५, २०७७ पर्सा : ठगी धन्दामा सक्रिय अजय कुमार रायलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल प्रहरीको नक्कली इन्स्पेक्टर बनेर ठगी गर्दै गर्दा उनी पक्राउ परेका परेका थिए।
आज उनलाई पर्सा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीकै दुरुस्त पोसाक लगाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हुँ भनी ठगी गर्दै आएका उनलाई वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ नगवामा रहेको देव पार्टी प्यालेसबाट पक्राउ गरिएको पर्साका प्रहरी नायव उपरीक्षक मनोजित कुँवरले बताए। पेशेवर नै थिए २०७२ सालमा पनि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा कसुरदार ठहर भई ११० दिन जेल जीवन बिताइसकेका उनी ठगी धन्दामा पेशेवर नै रहेको देखिएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ।
सो समयमा उनले सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको पाइएको छ। सो मुद्दामा भने उनी बाराबाट पक्राउ परी कैद भुक्तान गरिसकेका कसुरदार रहेका पर्साका प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायव उपरीक्षक कुँवरले बताए। पक्राउ परेका अजय बारा जिल्ला जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ चौधरी टोलका २९ वर्षीय हुन्। लोकसेवाको परीक्षा पनि चलाउँथे अभियुक्तले नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक पद र खरिदारको लिखित परीक्षा संचालन भइरहेको भनी पर्सा, बारा र सर्लाहीका विभिन्न २१ जनासँग परीक्षा लिइरहेका थिए।
प्रहरीले सोही समयमा पक्राउ गर्न सफल भएको उपरीक्षक कुँवरले बताए। पक्राउ पर्दा बुधबार पनि २१ जना व्यक्तिहरु लोकसेवाको परीक्षा दिन भनी उनी बसेको देव पार्टी प्यालेसमा उपस्थित भेटिएका थिए।
घटनास्थलमा पुगेका पर्साका प्रहरी नायव निरीक्षक वैद्यनाथ दासका अनुसार अभियुक्तले साँच्चैको लोकसेवा आयोगको परीक्षा लिएझैं अन्य केहीलाई पनि सहयोगीका रुपमा खटाएका थिए। सामान बरामद अभियुक्तसँग प्रहरी सहायक निरीक्षकको प्रवेश पत्र थान २, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक पदको प्रवेश पत्र २१ थान, त्यसैको प्रश्न पत्र २६ थान, खरिदारको प्रवेश पत्र १ थान पनि बरामद भएको छ।
सहयोगी ५ जना पनि पक्राउ परीक्षा हलमा अजयलाई सहयोग गरिरहेका बारा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-५ का ५७ वर्षीय हीरालाल महतो, २८ वर्षीय वसन्त चौधरी, वीरगन्ज महानगरपालिका-१६ का रवीकुमार चौरसिया, वडा नम्बर २७ का घर भई वीरगन्जको रानीघाट बस्ने वर्ष २५ का रामजी चौरसिया, पर्साकै पकाहामैनपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सवैठवाका ४७ वर्षीय शिव नारायण चौरसियासहित अन्य ५ जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। ठगीमा परे १३ जना लोक सेवाको परीक्षा भनी आफैं परीक्षा लिएर अभियुक्तले सरकारी जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पर्सा र बाराका १३ जनासँग कुल ३ लाख ६१ हजार ठगी गरिसकेको भेटिएको छ।
ठगीमा पर्नेहरु वीरगन्ज-२ छपकैयाका २३ वर्षीय सुनिल महतो, बहुदरमाई नगरपालिका-४ का २३ बर्षीय जितेन्द्र महतो, पर्सागढी नगरपालिका १ का २६ बर्षीय रामकिशोर राई थारु, वीमनपा ३१ का २६ बर्षीय सुनिल शर्मा, सोही ठाउँका वर्ष २७ का सन्तोष राम, वर्ष २६ का अशोक साह तेली, वीरगन्ज-३२ का २५ वर्षीय राजन कुमार पटेल, छिपहरमाई गाउँपालिका १ का १९ वर्षीय संजय कुमार साह, पकाहामैनपुर-४ का १९ वर्षीय राकेश चौरसिया र वीरगन्ज १६ कै २० बर्षीय अरविन्द कुमार चौरसिया रहेका छन्।
त्यसै गरी बाराको कोल्बी नगरपालिका ७ धोधरपाका बर्ष २१ का राजेश राम, जितपुरसिमरा ११ का २८ बर्षीय रामप्रवेश राम, वडा नम्बर ७ ( आफ्नै वडा ) का २१ बर्षीय शत्रुधन साह कलवार रहेको पर्सा प्रहरीले अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्दै जनाएको हो। प्रहरी भ्यानमा नै समय समयमा घरमा आउँथे ‘लोकसेवाको परीक्षा भनी आफू पनि दिएर हेर्ने ठानेर आएकी आखिर होइन पो रहेछ,’ अजयको घर नजिकैकी एक युवतीले भनिन्, ‘प्रायः युनिफर्ममा हिँड्ने र प्रहरीको भ्यानमा पनि पटक पटक घरमा आउने गरेकोले नक्कली प्रहरी भएको शंकै गर्न सकिएन।’
खतरा मोल्दै अग्रपंक्तिमा नेपाल प्रहरी, तर सरकारले दिन सकेन जोखिम भत्ता
असोज १५, २०७७ काठमाडौं : कोरोनाको संक्रमण पछिल्लो समय प्रहरी संगठनमा तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ। सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन दिनरात नभनी खटिरहेका कैयाैं सुरक्षाकर्मी कोरोनाको सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। हुलमुलमा जानुपर्ने, संक्रमितको व्यवस्थानदेखि कोरोना रोकथाममा अंग्रपंक्तिमा उनीहरु खटिइरहेका छन्। कतिपय भने मुक्त भइसेकेका छन्। सरकारले यसरी अंग्रपंक्तिमा खट्ने प्रहरीलाई जोखिम भत्तावापत रकम उपलब्ध गराउने बताए पनि हालसम्म भने उनीहरुले पाउन सकेका छैनन्।
कोरोनाबाट उपत्यका थप बढी जोखिममा छ। हाल उपत्यकामा करिब १ हजार ५ सय ७१ जना प्रहरीमा संक्रमण भइसकेको छ। जसमध्ये ९ सय २९ जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यस्तै ६ सय ४२ जना प्रहरी हाल अस्पताल र होम क्वारेन्टाइनमा छन्। यस्तै, ट्राफिक प्रहरीका करिब ३ सय ४५ जना संक्रमित भइसकेका छन्। उपत्यकामा हाल ४४ वटा ट्राफिक इकाइ छन्। जसमा स्वीकृत जनशक्ति १ हजार ८७ जना ट्राफिक जवान छन् भने कार्यरत १ हजार ४ सय ९ जना छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसबी कुबेर कडायतका अनुसार कोरोनामुक्त भएका प्रहरीहरू पुन आफ्नो काममा फर्किसकेका छन्।
‘कोरोना लागेका प्रहरीहरू आइसोलेसनमा राखेर नेगेटिभ रिपोर्ट देखिएपछि थप ७ दिन आरामका लागि बिदा दिने गरेका छौं’, उनले भने, ‘उहाँहरुलाई निगरानी गर्दै ७ दिनपछि भने काममा फर्किने गर्नुभएको छ।’ एकातिर कोरोना हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा चुनौती र समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरीको हातमा छ। त्यसमाथि हरेक दिन हुने आन्दोलन र हुल दंगामा पनि प्रहरी नै फ्रण्टलाइनमा खटिएका छन्। प्रहरीमा कोरोनाको बढ्दो संक्रमण सामान्य नागरिकको तुलनामा बढी छ।
उपत्यकाको बढ्दो सवारी व्यवस्थापन खटिएका ट्राफिकहरूमा पनि कोरोना संक्रमणले आक्रान्त बनाएको छ। उनीहरु पनि कोरोनामुक्त भएको ७ दिन आराम गरेर सडकमा खटिएका छन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख भीम प्रसाद ढकालले कोरोनामुक्त भएका ट्राफिकलाई उनीहरूको शरीरको सुरक्षा गर्दै काममा खटाइएको बताए।
‘संक्रमित भएर निको भएका ट्राफिकलाई कम सवारी हुने र भीड नहुने स्थानमा खटाएका छौं। कतिपय आफ्नै घर वा कोठा नजिकै ड्युटीमा छन्’, उनले भने, ‘हामीले ट्राफिकहरुको मनोबल उच्च बनाउन सम्बन्धित अधिकृतहरुको कमाण्डमा निगरानी र सुरक्षाबारेमा आवश्यक काउन्सिलिङ गरिरहेका छौं।’ कतिपय प्रहरी कोरोनामुक्त भएको ७ दिनमा नै सडकमा काममा फर्किँदा उनीहरु पूर्ण रुपले फिट हुन सकेका छैनन्।
शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालमा निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले उपचार क्रममा भेण्टिलेटर र अक्सिजन नै प्रयोग भएका कुनै पनि बिरामी कोरोनामुक्त भएको महिनौंसम्म आराम गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कतिपय जटिल केशमा रहेका बिरामीहरू निको हुने बितिक्कै आफ्नो काममा फर्किन नसक्ने हुन सक्छन्’, उनले भने, ‘सामान्य लक्षण नदेखिएका बिरामी भने १५ दिनमा पुन काममा फर्किन सक्छन्।
‘कोभिड-१९ लाग्दैमा रोगहरुले आक्रमण गरिहाल्छन् वा कमजोर भइ हालिन्छ भन्ने पनि नरहेको राजभण्डारीले बताए। संक्रमित र संक्रमण मुक्त प्रहरीहरूलाई बेला बेला काउन्सिलिङ गर्ने काम भएको प्रवक्ता कडायतले उल्लेख गरे। प्रहरी निको भएको ७ दिनमा नै काममा फर्किनुपर्ने त्यस्तो अवस्था किन आयो त ? नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि भर्ना प्रक्रिया रोकिएको र यो लकडाउन अवधिमा रिटायर्ड हुने अधिकृतहरु आफ्नो घर लागेपछि प्रहरीमा थप कार्यभार थपिन पुगेको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। ‘जस्तोसुकै कठिनाइमा पनि काम गर्न सक्ने प्रहरीको विशेषता हो।
तर, कोरोनामुक्त भएर सडकमा आइहाल्नुपर्ने बाध्यता पनि प्रहरीमा छ’, उनले थपे, ‘प्रहरीमा कोरोना संक्रमण थपिएको छ। उनीहरू बिरामी हुँदा, कोरोना नलागेका प्रहरीमा कामको चाप थपिँदै गएको देखिन्छ।’ कोरोना मारमा जोखिम त छँदैछ। कामको चाप पनि उस्तै छ। सरकारले जोखिम भत्ताको ललिपप पनि बाँडेको थियो। सीमित जनशक्तिले आफ्नो ‘ड्युटी आवर’ भन्दा बढी काम गरिरहँदा पनि आजसम्म सरकारले जोखिम भत्ताबारे भने कुनै चासो नदेखाएको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। प्रहरीले कोरोना महामारीमा जोखिम उठाएर काम गरिरहनुपरेको छ। काममा थपिँदै गएको छ। तर सरकार आफूहरुलाई प्रोत्साहन गर्न भने चुकिरहेको उनले बताए। ‘सरकारले आश पनि देखाउने, काममा पनि खटाउने तर निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले प्रहरीहरुमा निराशा थपेको छ’, उनले बताए।